Xerada Bootka Aasaasiga ah ee LinkedIn | Martech Zone
Xerada Bootka Aasaasiga ah ee LinkedIn
Khamiista, Noofembar 17, 2011 Axad, Janaayo 15, 2017 Douglas Karr
LinkedIn waxay leedahay in kabadan 135 milyan oo xubnood oo caalami ah celceliska dakhliga qoyska ee isticmaalaha LinkedIn ayaa kabadan $ 100,000 sanadkii! Waxa ugu horreeya ee aan ka soo laabto safar shaqo ama kulan ayaa ah inaan galo dhammaan xiriirada aan ku leeyahay LinkedIn, dib u eego astaamahooda, oo aan arko kuwa ay tahay inaan la socdo. Xaqiiqdii, xitaa aqbali maayo dib u soo celinta… haddii aadan haysan astaan ​​guud oo LinkedIn ah, waa shaqo joojintii ugu horreysay ee lagaa sameeyo.
LinkedIn waa faraska madoow ee warbaahinta bulshada. Dhamaanteen waan ognahay inay halkaas ku jirto, laakiin in yar ayaa u adeegsada kartideeda buuxda. Tani waa khalad weyn, gaar ahaan markay tahay suuqgeynta ganacsigaaga. Tababarkan tababarka aasaasiga ah ee xerada 'LinkedIn' wuxuu ku siin doonaa qalabka lagama maarmaanka u ah inaad u adeegsato goobta dhammaan ganacsigaaga iyo baahiyaha suuqgeynta shaqsiyeed. Laga soo bilaabo Maskaxda infographic.
Waxyaabaha kaliya ee diidmada ah ee aan ka qabo LinkedIn ayaa ah in tayada kooxaha ay si aad ah hoos ugu dhacday iyadoo la adeegsanayo kuwa wax basaasa oo lacag sameeya. Sidoo kale, kumaanan arag wax xayiraad ah xayeysiinta LinkedIn. Waxay u muuqataa inay tahay hal-joogsi loogu talagalay dadka ganacsiga. Way quusayaan, helaan wixii ay u baahnaayeen, wayna baxeen. Runtii uma muuqato inay jiraan wax qasbaya oo ku ilaaliya martida halkaa.
Tags: ganacsi ku xiranLinkedInshabakad ku xiransetin kuxiran
Ku daabac Qalabkaaga Tafaariiqda khadka tooska ah 'Milo'
Qiimaha iyo ROI ee Shirarka